Izindaba - Ezinye izindaba ezidinga ukunakwa ngohlobo lwenhlanganisela yedivayisi yokugeza iso
Ezinye izindaba ezidinga ukunakwa ngohlobo lwenhlanganisela yedivayisi yokugeza iso
Kunezinhlobo eziningi zama-washer wamehlo. Abakhiqizi bakhetha ama-washer wamehlo alungele izimboni zabo ngokwezimo nezidingo zabo. Ngenxa yezinhlobo ezahlukahlukene zokuwashwa kwamehlo, ezinye izindlela zokuqapha azifani ngenkathi kusetshenziswa. Namuhla sizokwethula izindaba ezidinga ukunakekelwa ngomshini ohlanganisa amehlo.
I-washer yamehlo ehlangene ifakwe izinto zokusiza zokuqala zohlelo lokufafaza kanye nesistimu yokuwasha iso. Ifakwe ngqo emhlabathini ukuze isetshenziswe.
Lapho amakhemikhali efafazwa ezingutsheni noma emzimbeni wabasebenzi, uhlelo lokufafaza i-compound washer yeso ingasetshenziselwa ukuwasha, futhi isikhathi sokuwasha okungenani imizuzu eyi-15; Lapho izinto eziyingozi zichaphazeleka emehlweni, ebusweni, entanyeni noma engalweni yabasebenzi, uhlelo lokuwasha iso lwe-washer eye eyinkimbinkimbi lungasetshenziselwa ukufutha, futhi isikhathi sokugubha okungenani imizuzu eyi-15. I-eyehua eyakhiwe nge-Bohua yenziwa ngezinto ezisezingeni eliphakeme, ezingagcini nje ngokuhlangabezana nezidingo zenhlanzeko, kepha futhi zinamandla okumelana nokugqwala.
Ukuhlinzekwa kwezinto zokusiza eziphuthumayo, ukulungiswa kwezinhlelo zokuhlenga eziphuthumayo kanye nokuzivivinya okuphuthumayo; Ukuthi ukwakheka kwendima ephuthumayo kunengqondo futhi kubushelelezi; Ukuphenywa, ukuvinjelwa kanye nokuphathwa kwamaphoyinti obungozi azungeze ibhizinisi noma kusasebenza.
Ukunakwa kufanele futhi kunikezwe kalula ukufakwa. Ukuthembeka ngesikhathi sokusetshenziswa, njengokuvuza kwamanzi, njll. Ukusebenza kunqubo yokulungisa, lapho izingxenye eziyisihluthulelo ezifana ne-valve yebhola ne-eyewash zidinga ukushintshwa, kufanele kube lula ukuqaqa, ukufaka kabusha nokufaka kabusha, futhi izindleko zesondlo ziphansi . Namandla service emva-sales service technical, ongaxazulula izinkinga ngendlela esifike ngesikhathi futhi ngempumelelo.
Ngemuva kwesingeniso sethu, ngikholwa ukuthi nawe unokuqonda okuthile ngokuhlanganiswa kwamehlo okuhlanganisiwe, kanye nezinye izindaba ezidinga ukunakwa lapho usebenzisa. Uyemukelwa ukuvakashela iwebhusayithi yethu, ngikholwa ukuthi uzomangala